I-Evocalize: ITekhnoloji yeNtengiso eBambiseneyo yabaThengisi beNdawo kunye neSizwe-ukuya-kweNdawo | Martech Zone
Xa kuziwa kwintengiso yedijithali, abathengisi basekhaya baye basokola ngokwembali ukugcina. Kwanabo bavavanya imidiya yoluntu, ukukhangela, kunye nentengiso yedijithali bahlala besilela ukufikelela kwimpumelelo efanayo naleyo ifunyenwe ngabathengisi belizwe.
Kungenxa yokuba abathengisi bendawo bahlala beswele izithako ezibalulekileyo - ezinje ngobuchule bokuthengisa, idatha, ixesha, okanye izixhobo - zokwandisa imbuyekezo entle kutyalo-mali lwabo lwentengiso yedijithali. Izixhobo zokuthengisa ezonwatyelwa ziibrendi ezinkulu azakhelwanga iimfuno (okanye iindawo zamaxabiso) zamashishini amancinci nasekhaya acinezelekileyo. Kwangaxeshanye, iinkampani ezinkulu ziyaqhubeka nokwandisa ukhokelo lwazo kwaye zikhule ngakumbi, iinkqubo zentengiso yedijithali eqolileyo.
I-Evocalize kukulinganisa ibala lokudlala. Itekhnoloji yabo yentsebenziswano yokuthengisa izisa izixhobo zentengiso yedijithali ephucukileyo kubathengisi basekhaya nakwilizwe ukuya kwalapha ekhaya ukuze ukuveliswa kwemfuno kunokusebenza ngakumbi kwaye kube nefuthe. Abathengi be-Evocalize babone ukuphucuka kwe-400% ekusebenzeni kwentengiso yedijithali kunye nokuncipha kwe-98% kwixesha elichithwa ngeveki kwiinzame zentengiso yedijithali ngamaqela asekuhlaleni.
Intengiso yedijithali inokuba yindlela enexabiso kumashishini asekhaya ukufumana ukuqondwa kophawu kunye nokuqhuba izikhokelo. Kodwa ubuchwephesha, idatha, kunye netekhnoloji efunekayo ukwenza kunye nokulinganisa iinzame zentengiso yasekhaya zihlala zinyibilika phakathi kwekomkhulu, amaqela asekhaya, kunye namaqonga amaqabane.
Ngawo onke amagalelo ayimfuneko kunye nezakhono eziye zaqhawulwa, kuya kusiba nzima (kwaye kuthatha ixesha) kumashishini asekhaya ukuba abandakanyeke kwintengiso yedijithali kwaye akhulise ingeniso kunye nesiseko sabathengi. Kwaye kubarhwebi abamanyeneyo abanoxanduva lwemizamo yentengiso yelizwe, kunzima ukuyila, ukwenza, ukongamela kunye nokulungelelanisa amaphulo engingqi amakhulu eendawo kunye nabameli abaninzi basekhaya okanye iiarhente.
I-Evocalize yenza intsebenziswano phakathi kwabathengisi basekhaya, iimpawu zabazali, kunye namaqonga etekhnoloji, inceda ukuphelisa iisilos zolwazi, ukuqinisekisa ukuthotyelwa kunye nokuphucula iziphumo zentengiso. Iqonga lixhobisa abathengisi ngezixhobo ezilungelelanisa kunye nokwenza ngokuzenzekelayo ukudalwa kweenkqubo zokuthengisa kunye nokwandisa i-ROI yamaphulo.
Iimveliso zabazali zinokwabelana ngokulula ngeenkqubo zentengiso zasekhaya ezakhiwe ngezona zenzo zilungileyo, ii-asethi ezivunyiweyo zoyilo kunye nemiyalezo, kunye nabaphulaphuli ngokomlinganiselo kunye nabarhwebi basekhaya, okubavumela ukuba baphumeze urhwebo olukhethekileyo noluphezulu kuFacebook, Instagram, Google, Tiktok kunye nezinye. amajelo akwi-intanethi. Oku kuvumela abathengisi bendawo ukuba banciphise iiyure zomsebenzi wephulo ukuya kwimizuzu embalwa nje. Enyanisweni, enye inkampani ye-real estate yabona inani leveki lexesha elichithwa ekuthengisweni kwee-arhente liyancipha ukusuka kwiiyure ezili-9 ukuya kwimizuzu nje eyi-9.
I-Evocalize inikwe amandla ngokuzenzekela kunye nokufunda koomatshini ukuze abathengisi bakwazi ukwenza ngokwezifiso kwaye baqalise amaphulo entengiso yedijithali ngokuchofoza nje okumbalwa. Itekhnoloji yokuphucula ifunda ukuba yintoni na nengasebenziyo kuzo zonke iinkqubo, ilungelelanisa ngokuzenzekelayo ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nokunceda ukwandisa uhlahlo lwabiwo-mali lwentengiso. Ngapha koko, ukwenziwa ngcono kuphucula ukusebenza kwenkqubo ngamaxesha amabini ukuya kwamane ngokomndilili.
Itekhnoloji ye-Evocalize idibanisa nezixhobo ezikhoyo (ezifana neCRM okanye iwebhusayithi yenkampani yangaphakathi) kwaye ilungiselelwe ukuphawulwa komthengi ngamnye kunye neemfuno ezithile. Izakhono zayo zibandakanya isizukulwana esikhokelayo, i-traffic website, ulwazi kunye nokuthengisa, kunye nezinye iinjongo zentengiso yedijithali, kunye nokunika ingxelo kunye nohlalutyo.
Itekhnoloji ye-Evocalize ixhasa amashishini kuwo wonke amashishini, kubandakanywa izindlu, izindlu, izindlu ezininzi, iinkonzo zemali, iindawo zokutyela ezikhawulezayo kunye nokuhamba. Ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezulu kwesigidi seeprogram zentengiso yedijithali eziye zaqhutywa kwitekhnoloji ye-Evocalize, ivelisa izigidi zeenkokeli kunye namawaka entengiselwano.
Amabali empumelelo: PHUMA kwiRealty kunye neAlaska Airlines
Ezi zifundo zilandelayo ziyimizekelo nje embalwa yezibonelelo ze-Evocalize abathengi bazonwabelayo xa usebenzisa iqonga:
PHUMA kwiRealty Corp: I-EXIT Realty ixhobisa abathengisi kunye neearhente ezinobuchwephesha obukhokelayo ukuze bathenge kwaye bathengisele abathengi babo amakhaya. I-EXIT yayifuna ukuqhubela phambili ukufikelela kwayo ngentengiso ye-Facebook. Ukwenza oko ngokomlinganiselo, UKUPHUMA kwakudingeka ukuvula idatha esuka kwimithombo emininzi yangaphakathi nangaphandle ukuze wenze ngokuzenzekelayo ukuyilwa kwabaphulaphuli, ukuyila, kunye neenkqubo zentengiso.
I-Evocalize incede i-EXIT yenza ithala leencwadi elilodwa leenkqubo zentengiso ye-Facebook (ebizwa ngokuba yi-Blueprints) ngaphakathi kweqonga le-intanethi le-EXIT. Amaqela amabini adityanisiwe kwintlangano, iwebhusayithi, iCRM, kunye nenkonzo yoluhlu oluninzi (MLS) idatha yedatha - eyenza ukuba uluhlu lwasekhaya olusandul 'ukuthunyelwa lubonakale kwigalari ye-Blueprint ye-arhente, evumela ii-arhente ukuba ziqalise imikhankaso ngokuchofoza okumbalwa okanye zizenzele ngokupheleleyo xa ikhaya elitsha lifika kwimarike.
Ubambiswano lubangele ukuncipha kwe-90% kwixesha le-EXIT lamawaka ee-arhente kunye nabarhwebi abachitha ukulawula iinkqubo zokuthengisa kwaye bavelise izinga lokucofa (CTR) 300% ngaphezu komyinge woshishino.
Sichitha i-97% ngaphantsi nge-Facebook kunye ne-EXIT Ad Centre (enikwe amandla yi-Evocalize) kunokuba senze enye i-generator enkulu ekhokelayo. Sifumana izikhokelo ezikumgangatho ophezulu kwaye ngaphezulu kwazo.
UMichele Bilow, umthengisi werekhodi kunye ne-EXIT Central Realty eDover, eDelaware
Alaska Airlines: IAlaska Airlines iphakathi kweyona nqwelo moya inkulu kuMntla Melika kwaye ikomkhulu layo liseSeaTac, eWashington. IAlaska Airlines yayifuna ukuphucula izinga lokubhukisha elizifumanayo ngokusebenzisa amajelo eendaba ezentlalo anjengoFacebook kunye ne-Instagram. Ukwenza njalo, bekudinga iqabane elinokunceda ukukala kunye nokwenza iintengiso ezenzelwe wena.
Izixhobo ezizenzekelayo ze-Evocalize zenza ukuba iAlaska Airlines yabelane ngeentengiso ezenzelwe umntu kakhulu kunye nabahambi abanomdla kwiqhezu lexesha nakwizinga elikhulu. Nge-Evocalize, iAlaska Airlines inokutshintsha iinkcukacha njengendawo ekuyiwa kuyo, amaxabiso, kunye ne-inventri ngexesha lokwenyani, inceda ekuphuculeni imizamo yokukhangela kuyo yonke imidiya yoluntu.
I-Alaska Airlines ikwazile ukuqhuba ngaphezulu kwe-35,000 yeentengiso ezizodwa njengenxalenye yeli phulo. Le miyalezo eyenzelwe wena inxibelelene nabo baza kuba ngabakhenkethi, ivelisa ukonyuka okuphindwe kahlanu kokubhukisha ngokuthe ngqo xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zabo eziqhutywa ngaxeshanye. Oku kubangele ukonyuka kwe-450% kwingeniso yokubhukisha uhambo kwinkampani yeenqwelomoya.
Qhuba iziphumo ngokuThengisa ngokuBambisana
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokuba ukuthengisa ngentsebenziswano kunokukunceda njani uqhube iziphumo zeshishini elinentsingiselo kwaye wenze ingeniso eninzi:
tags: iindiza zeAlaskaesizisebenzelayoIiplaniukuthengisa ngentsebenziswanoCRMimisinga idathaintengiso esasaziweyovakalisaPHUMA kwiRealityIntengiso ye-Facebookinstagramukuzenzekela ngokuzenzekelayomlsiinkonzo zokudwelisa ezininzikuzwelonke ukuya kwindawo